IApartment eFabulous kwiNdlu yeMbali eSt Aubin - I-Airbnb
IApartment eFabulous kwiNdlu yeMbali eSt Aubin
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVijay
Xa iyi-346 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Besisoloko sicoca ngokucokisekileyo phakathi kokuhlala kwaye ngoku sikwabulala iintsholongwane kuyo yonke imiphezulu efana nezibambo, izitshixo zokukhanya njl.njl.
IJersey ikhuseleke kakhulu kwaye ibisoloko inelona zinga liphantsi le-Covid-iYurophu Bonke abakhweli abafikayo bafumana uvavanyo lwasimahla ngeziphumo ngeSMS.
ISiqithi siphantse sabuyela kwisiqhelo-ibhari ezininzi, iindawo zokutyela kunye neevenkile zivuliwe. Iinkcukacha ezipheleleyo ziyafumaneka kwiwebhusayithi kaRhulumente waseJersey - nceda uzive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Ngaphakathi-yenziwe igumbi elinebhedi e-1 kwindlu yedolophu eneminyaka engama-400 ubudala kwi-Idyllic St Aubin, kwindawo edumileyo ye-cobbled High St. Ime ngaphantsi komzuzu wokuhamba ukusuka kwiindawo zokutyela, iibhari, iiCafes kunye nezibuko, kodwa ngokumangalisayo kuthuleke kwaye kunoxolo.
Nokuba undwendwela iJersey emsebenzini okanye uyonwaba, iSt Aubin yeyona ndawo ifanelekileyo. Sinokutya nesiselo esimnandi kwaye sikwisiqingatha sendlela phakathi kwesikhululo seenqwelomoya kunye neSt Helier.
Umgama omfutshane ukusuka kwiKholeji yaseSt Brelade. I-intanethi ye-fiber enesantya esiphezulu.
Le yiflethi yabucala ngaphakathi kwendlu eyimbali entliziyweni yelali yaseSt Aubin.
Kukho igumbi lokuhlala elineTV & net flix kunye nebhedi etofayo yesofa.
Nangona zininzi iindawo zokutyela ezivenkileni, kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinehobhu, i-oveni kunye netafile yesidlo sakusasa.
Kukho ibhedi elala abantu ababini etofotofo, kunye nebhedi yesofa enobungakanani obuphindwe kabini.
I-wifi ekhawulezayo – i-346 Mbps
4.92 · Izimvo eziyi-123
ENKULU indawo yokutya ngaphandle-ngaphantsi kwemizuzu embalwa uhamba ukusuka: Bracewells, The Salty Dog, Murrays, The Boat House, Nude Food on the Beach, The Spice House, The Old Court House, Bon Viveur, The Lazin Lizard, Seafish Cafe , Noya Shapla, La Belle Gourmande, The Harbour View, DL's at The Harbour Gallery, Mellow Yellow, Pedros, Tenby - oh kwaye kukho iCosta.
Umbuki zindwendwe ngu- Vijay
Sisendlini yonke kwaye siyakuvuyela ukunika iingcebiso kunye noncedo ngokubhukisha indawo yokutyela-siyazazi ezona ndawo zihambahambayo kunye neendawo zokundwendwela-nceda ubuze nje!